၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လရဲ့ သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ လူငယ်ပွဲတော်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အထူးသဖြင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စသည်တို့ဖြင့် သြဂုတ်လဟာ အကျိုးရှိစွာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလသည်လည်း လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့် ပြည့်နှက်နေမည့် ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ယခုလ လစဉ်သတင်းလွှာမှာတော့ ကျား၊မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေး ကိစ္စရပ်များမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ GEN အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ မတင်မမဆွေ (ရတနာ့မေတ္တာ)၏ စကားလက်ဆောင်ကို မျှဝေထားပါတယ်။ နောက်လများမှာလည်း GEN အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များနှင့် CU ဝန်ထမ်းများမှ မိမိတို့၏ GEN နှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ စကားလက်ဆောင်များ ပါဝင်မျှဝေပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
မတင်မမဆွေ (ရတနာ့ မေတ္တာ)
ယခုဇူလိုင်လအတွက် ရတနာ့မေတ္တာအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ယခုလို နှုတ်ဆက် စကားပြောဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ကြည်နူးမိပါတယ်။
GEN အဖွဲ့တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော ကာလအတွင်းမှာ GEN အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ခွင့်၊ လေ့လာသင်ယူခွင့်တွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း GEN အဖွဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်။ အနာဂတ်တွင်လည်း GEN နှင့်အတူ ဆက်လက်ပြီး မိမိတတ်နိုင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခွင့်ရရှိရန် မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့် နောင်တွင် ရေရှည်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ဘားအံ၊ မြစ်ကြီးနား၊ မန္တလေး)
နှစ်ရက်ကြာ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအား သြဂုတ်လတွင် လေးကြိမ်ခန့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့ထိ ဘားအံတွင် ၂ ကြိမ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ နှင့် ၂၁ ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနားတွင် တစ်ကြိမ်၊ သြဂုတ်လ ၂၃ နှင့် ၂၄ ရက်နေ့ မန္တလေးတွင် တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲများအား ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်နှင့် DCA-NCA မှ ဦးဆောင်ကာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မတူညီသော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများစွာမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘားအံတွင် စုစုပေါင်း (၃၈) ဦး (ကျား ၁၁၊ မ ၂၇)၊ မြစ်ကြီးနားတွင် စုစုပေါင်း (၁၅)ဦး (ကျား ၅၊ မ ၁၀)၊ မန္တလေးတွင် စုစုပေါင်း (၂၉)ဦး (ကျား ၉၊ မ ၂၀) တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤဆွေးနွေးပွဲများသည် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်အား ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် စွမ်းဆောင် ရည်အား မြှင့်တင်ပေးရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်နှင့် DCA-NCA တို့သည် ဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရလဒ်ပေါ်မူတည်ကာ အနာဂတ်တွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သည့် အစီအစဉ်အားတစ်ခုအား ရေးဆွဲတည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့ Aureum Palace Hotel ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် (၁.၈.၁၈)မှ (၄.၈.၁၈) အထိ (၄) ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန် ရက်၏ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များ၊ Coordination Unit မှ ဝန်ထမ်းများမှ ရှေ့ဆက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မူဝါဒရေးရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ရန်ကုန်နှင့် နယ်ရုံများမှ ဝန်ထမ်းများ စုံလင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်
ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံကာ ဘားအံမြို့ ရေဘေးနှင့် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အလှူငွေ သိန်း (၂၀) လှူဒါန်းခြင်း
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံခံစား နေရ သော မြို့နယ် (၇)ခုတွင် အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် အခြားဘေးအန္တရာယ်သင့် ပြည်သူလူထုအား အဓိကထားသော ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုအား ကောက်ယူရန် ဒေသဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေးနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရလဒ်များအား ထိခိုက်ခံစားရသော အသိုင်းအဝိုင်းများအား ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်များတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ရန်ကုန်နှင့် နယ်ရုံးများမှ ဝန်ထမ်းအသစ်များအတွက် အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း မိတ်ဆက်သင်တန်းအား သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့နှင့် ၁၀ ရက်နေ့များတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Engaging Men Working Group Meeting
Engaging Men လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးအား သြဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၉)ဦး (ကျား ၄၊ မ ၅) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင် Engaging Men အနေဖြင့် မည်သို့ပါဝင်ရန်၊ ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်တွင် မည်သို့ပါဝင်ရန်နှင့် Engaging Men ၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များအား ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် သို့မဟုတ် အဆင်မြှင့်တင်ရန်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
PoVAW Advocacy သင်တန်း
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်မှ PoVAW Advocacy သင်တန်းအား၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၅)ရက်နှင့် (၁၆)ရက်များတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ရုံးခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း (၂၅)ဦး (ကျား ၄၊ မ ၂၁) တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ လက်ရှိဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများနှင့် အမျိုးသမီး များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး အတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Gender and Labour Law Working Group Meeting
သြဂုတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ - ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးအား သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်သူဦးရေ (၈)ဦး (မ ၈) တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခင် ဇူလိုင်လ UMFCCI တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကမ်ပိန်းအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး
၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအား သြဂုတ်လ ၂၃ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ရုံးခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ GEN-CU မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် လူဦးရေ (၂၃)ဦးခန့် (ကျား ၄၊ မ ၁၉)တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၆ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခု စီစဉ်ပြုလုပ်ရန်နှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေရန် အပါအဝင် ရှေ့ဆက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
GEN’s Internal Team Building
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Friday fun and learn အစီအစဉ်အား သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လည်ခင်းတွင် Program team ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ GEN-CU ဝန်ထမ်းများသည် စီစဉ်သူများ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုအရ အဖွဲ့များဖွဲ့ကာ ဂိမ်းများ အတူအကွ ပျော်ရွှင်စွာ ကစားခဲ့ကြပါသည်။
ရေကြီးမှုဒဏ်ခံစားရသောပြည်သူများအတွက် လူမှုစီးပွားဘဝအား စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ရေကြီးမှုဒဏ်ခံစားရသောပြည်သူများအတွက် လူမှုစီးပွားဘဝအား စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအား ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ရှိ ဓနုဓမ္မာရုံတွင် သြဂုတ်လ ၂၇ မှ ၂၈ ရက်နေ့ထိ နှစ်ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၊ Myanmar Heart Development Organization နှင့် Karen State CSOs(Youths) တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၇၄ ဦး (ကျား ၅၂၊ မ ၂၂) တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
GEN ၏ ကုိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော အစည်းအဝေးပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
GEN-CU ၏ Program Manager သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးကော်မတီမှ စီစဉ်ပြုလုပ်ကာ မြန်မာအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေ့ အခမ်းအနား
GEN-CU ၏ Program Manager သည် သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့တွင် IPEN Network မှ ကျင်းပသော Indigenous Women and Peace, Security and Empowerment အခမ်းအနား၏ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်ရှိ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများသည် အမျိုးသမီးများအားမည်သို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
GEN ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးနှင့် နည်းပညာအကြံပေးတို့သည် ဆရာဦးအောင်ထွန်းခိုင်နှင့်အတူ သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့မှ ၁၃ရက်နေ့အထိ မန္တလေးတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော လူငယ်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှုးသည် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စများ၊ ဥပဒေရေးရာ စဉ်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ ရင်ဆိုင်နေရသော လက်ရှိအခြေအနေနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးနိုင်သော ဥပဒေအသစ်များ ရေးဆွဲနိုင်ရေးတို့အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မမီးမီး (ခ) မသင်းသင်းအေး၏ ဈာပနာအခမ်းအနား
သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးနှင့် နည်းပညာအကြံပေးတို့သည် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြင့် ရုတ်တရတ် ကွယ်လွန်သွားသော ၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့သူ မမီးမီး၏ ဈာပနာ့ အခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
GEN ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးနှင့် နည်းပညာအကြံပေးတို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့ ဘားအံမြို့တွင် “Safe Spaces for Youth” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် လူငယ်ကွန်ရက်မှ ဦဆောင်ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူငယ်များနေ့တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းနေလူငယ်များနှင့် ကျောင်းပြင်ပမှ လူငယ်များအပါအဝင် လူငယ် ၆၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ရဲဌာန၊ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် လူငယ်များ ပါဝင်သော စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ် မြို့ပေါ်ရှိ လူငယ်များ၏ လုံခြုံရေးအား မည်သို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးကို အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဖျော်ဖြေရေးနှင့် ပညာပေး အစီအစဉ်များသည် အခမ်းအနား၏ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှုးသည် စိတ်ခွန်အားတက်ဖွယ် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူငယ်များအား နေရာပေးသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ထောင်ရာတွင် လူငယ်များပါဝင်မှုသည် မည်သို့အရေးကြီးကြောင်းအား သတင်းစကားများပေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်အနေဖြင့် အသိပညာပေးပြခန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ စာအုပ်စာတမ်းများအားလည်း ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
LRC နှင့်အတူ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြည်လည်နေရာချထားရေး၊ ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
GEN ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးနှင့် နည်းပညာအကြံပေးတို့သည် ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နှင့် သြဂုတ်လ ၂၀ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံကာ ကျား၊ မ ရေးရာ ကိစ္စရပ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးကာနှင့် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော အစီအစဉ်များ အထူးသဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အစီအစဉ်များအကြောင်း အသိပေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရေဘေးသင့် ပြည်သူလူထုများအတွက် လူသာချင်းစာနာထောက်ထားရေး အကူအညီရန်ပုံငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Colors Rainbow နှင့် အတူ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဥပဒေပြုကော်မတီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
GEN ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးနှင့် နည်းပညာအကြံပေးတို့သည် Colors Rainbow နှင့်အတူ ဥပဒေပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် သြဂုတ်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံကာ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၅ နှင့် ၃၇၇ တို့အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးနှင့် ရေးဆွဲပြီးသော လူငယ်ရေးရာ မူဝါဒများအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မည်သို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုသင်တန်း
GEN ၏ နည်းပညာအကြံပေး ဦးအောင်ထွန်းခိုင်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအား သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုများအကြောင်း သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။
Safe & Fair: Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the ASEAN region
GEN ၏ နည်းပညာအကြံပေးသည် သြဂုတ်လ ၃၀ နှင့် ၃၁ ရက်နေ့များတွင် နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော "Safe & Fair: Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the ASEAN region" အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက် အကူပြု မိတ်ဖက်များ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများ၊ ပညာရှင်များနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ GEN ၏ နည်းပညာအကြံပေးသည် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော Chat Show တွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ အမျိုးသမီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးသော ဥပဒေများ ရေးဆွဲနိုင်ရေးနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေများအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရေး၊ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးနှင့် အသစ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးတို့အား အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Copyright © 2018Gender Equality Network, All rights reserved.
You are receiving this email because you are part of the Gender Equality Network.
Our mailing address is: Gender Equality Network
Building (99), 1st Floor, Room (1 A-D), Lamai Condo, Myay Nu Street, Sanchaung Township, Yangon
MONTHLY NEWSLETTER MARCH, 2019 (MYANMAR)
MONTHLY NEWSLETTER February, 2019 (ENGLISH)
MONTHLY NEWSLETTER JANUARY, 2019 (MYANMAR)
MONTHLY NEWSLETTER JANUARY, 2019 (ENGLISH)
Monthly NewsLetter December, 2018 (Myanmar)
Building (99), 1st Floor, Room (1 A - D), Lamai Condo Myay Nu Street.